News - Warbixinta falanqaynta caalamiga ah ee suuqyada 'Graphite electrode market'
saadaasha "korantada suuqa korantada" ee 2027 - saamaynta covid-19 iyo falanqaynta caalamiga ah ee nooca wax soo saarka (awoodda sare, awoodda sare ee sare, awoodda joogtada ah); Codsiga (foornada qaansoleyda, foornada laydhka, kuwa kale), iyo juqraafiga ”warbixinta ayaa lagu daray dalabyada cilmi-baarista.
Suuqa waxaa nalagu qiimeeyay $ 6,564.2 milyan sanadka 2019 waxaana la saadaalinayaa in uu na gaaro $ 11,356.4 milyan sanadka 2027;
Waxaa la filayaa inuu ku koco cagr ah 9.9% laga bilaabo 2020 ilaa 2027.
koronto-garaafku waa qayb muhiim u ah wax soo saarka birta iyada oo loo marayo habka foornada korantada (eaf). Kadib wareeg shan sano ah oo daran, dalabka korantada garaafku wuxuu bilaabay inuu kaco sanadka 2019, oo ay weheliso wax soo saarka birta. iyadoo adduunku aad ugu xeel dheer yahay deegaanka isla markaana horumaray waddammada horumaray ay aad u ilaalinayaan, madbacaddu waxay rajeyneysaa koboc xasiloon oo ku saabsan soosaarida birta cunnada iyo dalabka korantada garaafyada laga bilaabo 2020-2027.
Suuqa waa inuu ahaadaa mid ciriiri ku ah kordhinta awooda koronto garaafka garaafka.
Waqtigan xaadirka ah, suuqa adduunka waxaa ku badan gobolka asia pacific oo ka kooban 58% suuqa adduunka si wadajir ah. baahida sare ee korantada garaafka ee dalalkan ayaa loo aaneynayaa kororka sare ee wax soo saarka bir cayriin. sida ku cad ururka biraha adduunka, 2018, shiinaha iyo japan waxay soo saareen 928.3 iyo 104.3 milyan tan oo ah bir cayriin siday u kala horreeyaan.
In apac, foornooyinka qaansoleyda korantada leh waxay leeyihiin baahi weyn sababtoo ah kor u kaca qashinka birta iyo kororka tamarta korantada ee Shiinaha. Istaraatijiyadaha sii kordhaya ee shirkadaha kaladuwan ee apac ayaa dhiirrigelinaya koritaanka suuqa korantada garaafyada ee gobolka.
dhowr alaab-qeybiyeyaal bir ah oo ku yaal gobolka woqooyiga america ayaa si weyn diirada u saaray maalgashiga mashaariicda wax soo saarka birta. Maarso 2019, alaab-qeybiyeyaasha birta ee innaga - oo ay ku jiraan bir-kicinta birta,